Kungakhathaliseki ukuthi kufanele usebenzise idatha yebhizinisi lakho, ucwaningo noma umsebenzi, akukho okubi kakhulu kunokulinda amakhasi ukulayisha ku-Netscape Navigator noma i-Internet Explorer. Ngenkathi usebenzisa i-intanethi, ungase ubhekane nenkinga yokuxhumeka okuncane futhi ungase ulahlekelwe iningi lwedatha oyidingayo. Uma ubheka iwebhusayithi enzima noma ibhulogi ngezinkulungwane zamakhasi, kuzodingeka uchofoze imouse yakho izikhathi eziningi ukuze uthole lawo makhasi avulwe kahle. Siyabonga ukuthi izinhlelo ezikhethekile ze-extractor web yenza kube lula kuwe ukulayisha amasayithi wakho owathandayo ngaphandle kwenkinga. I-extractor yewebhu empeleni uhlelo oluthile olusiza abacwaningi, izintatheli, abafundi, abomabhizinisi, nabathengisi ukuthi bakhiphe idatha ngokushelelayo futhi babuke amakhasi ahlukene ewebhu ngejubane eliphezulu. Amanye amathuluzi athembekile kakhulu achazwe lapha - www millinery.